"Nissan Pathfinder" - imoto elinomlando ezikude. Ngokokuqala ngqá le Suv uvele eziphethe imakethe yomhlaba wonke ngo-1986. Futhi "Pathfinder" kwaba kuphela Melika. Le moto wabizwa ngokuthi "Tera" Kuzo zonke kwamanye amazwe. Ngokuhamba mashumi eminyaka ambalwa okugcina, lokhu Suv uyawuthanda impumelelo okufanele emakethe. Yiqiniso, isikhathi eside kangaka isikhathi "Nissan Pathfinder" sashintsha kaningi, hhayi kuphela ukubukeka kodwa futhi nomsebenzi.
Uma uthi nhlá, "Pathfinder" ayikwazi zihlukaniswa kusukela wakubo wonke-wheel uchungechunge "Tera". Nokho, umehluko zisuke zisekhona. Okokuqala, izinguquko eziye zehlela phambi bumper. Manje kube semikhawulweni kukhona oyindilinga xaxa, futhi ngemuva emotweni - kunalokho, emincane ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho design kwangithinta isandla eheleni, lapho kurediyetha ifihlekile. manje "Nissan Pathfinder" ifakwe emithathu esigabeni "imaski", eyenziwe isitayela "chrome". Kwakukhona round izibani kwenkungu bumper kanye-chrome elinamandla iminyango. Arches, izinsika, izinyathelo ... Iziphi izinto kancane nje kuphela kusetshenzwe Abaklami!
Ngokuvamile, okwenza ushintsho ukubukeka umshini, onjiniyela Japanese baye bakwazi ngokuphelele nesimanje Suv wakufaka luyingxenye wesilisa, izici ngesihluku.
"Nissan Pathfinder" - Ukucaciswa
Eminyakeni yamuva, ukushintsha ulayini nomkhiqizi powertrain banquma ukungayisebenzisi nhlobo, futhi kuphela ingasebenza modified ubudala. Ngakho, elidala 2.5-litre esebenzisa udizili isitshalo kwaqala futhi "ukuvuthwa" 16 amahhashi. Manje lokhu amandla iyunithi kwenza 190 hp esikhundleni owedlule 174. Lokhu injini base i Suv "Nissan Pathfinder". izici Kobuchwepheshe motor yesibili kwenza kube omunye Suv ezinamandla kakhulu futhi esheshayo ekilasini yayo. Nge ngevolumu 3.0 amalitha, lolu phiko eziyisithupha cylinder eba kuze kufinyelele 231 amalitha. a. amandla. Ngenxa yalokhu motor "Nissan Pathfinder" uyakwazi kuyashesha 200 km ngehora ngaphandle inkinga. I "Abangamakhulu" it is ukuthola 8.9 imizuzwana nje.
Kufundza ngababili nge 2.5 no-3.0-litre units 5-ngesivinini "Mechanics" eziyisithupha-step "okuzenzakalelayo" kanye CVT 7-esiteji. "Mechanics" ngaphambili itholakala kuphela 5-ngesivinini. By endleleni, le CVT 7-speed zinabantu ezintathu-litre ukufakwa kaphethiloli kuphela. Kufanele kuqashelwe ukuthi imoto ethembekile ezinjalo, njengoba "Nissan Pathfinder" ukulungisa awudingi olandelayo ambalwa ayizinkulungwane amakhilomitha. Izikhungo isikhawu kuyinto 15 000 km.
Fuel ukusetshenziswa imoto "Nissan Pathfinder"
Engine Ukucaciswa, njengoba sesibonile, sina, futhi ngenxa yalokho 'isifiso "bayoba elihambisana. Abanye abashayeli bathi "Nissan Pathfinder" ungakwazi "ukudla"-30 amalitha uphethiloli, kodwa idatha ipasipoti we esiphezulu ukugeleza rate of 13.5 amalitha ngamunye amakhilomitha angu-100. Nokho, kuzo zonke iminyaka engu-28 ukhona, akusona ukusetshenziswa ezahlukene ukonga uphethiloli.
Intengo "Nissan Pathfinder"
izici Technical esixoxe kakade, siya intengo. ERussia, izindleko isilinganiso imoto entsha ruble ayizigidi ezingu-1.5 kuya kwezingu-2.3, kuye ngokuthi ukucushwa. Amamodeli we 80-90s ethengisiwe ruble ayizigidi 150-200.
Fuel ukusetshenziswa 100 km ngasinye phezu BMW udizili noma uphethiloli?